အဆိုပါနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအဆိုပါ DVs အစီအစဉ်အဘို့အစတင်နေပြီ, 50,000 ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ for2020 ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ရှိပါတယ် 50.000 တစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရရှိနိုင်မတူကွဲပြားခြင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာ.
သင်သည်သင်၏မိသားစုသို့မဟုတ် / နှင့်သင့်အိမ်မှာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးအဲဒီမှာရုန်းကန်နေတဲ့သူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဤအသတင်းအချက်အလက်များအချင်းချင်းမျှဝေနိုင်ပါသည်. သူတို့ကဗီဇာဤအမျိုးအစားများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါမတူကွဲပြားခြင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာကဘာလဲ (DVs) အစီအစဉ်?
မတူကွဲပြားခြင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာ (DVs) "အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီ" အဖြစ်လူသိများ. အဖြစ်ကောင်းစွာထီဗီဇာ "အဖြစ်. အဆိုပါဗျူရိုကောင်စစ်ရေးရာကြောင့် 50.000 ကျပန်းရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူရှိနိုင်ပါပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတစ်ခုချင်းစီဘဏ္ဍာရေးနှစ်. နိုဝင်ဘာလအပေါ်များသောအားဖြင့်အောက်တိုဘာလအပေါ်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်နီးစပ်အဆိုပါကျောင်းအပ်. အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညီညွတ်သောပြည်နယ်မှာနေထိုင်လေ့လာလို့ရပါတယ်. အဆိုပါကျောင်းအပ်ကာလအတွင်းတဦးတည်းလျှောက်လွှာထက်ပိုမိုတင်သွင်းသူကိုလူတွေကအစီအစဉ်မှဖယ်ထုတ်ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနည်းဆုံးတစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးသို့မဟုတ်ယင်း၏ညီမျှရှိပါတယ်. ဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လိုအပ်သည်တစ်ခုသိမ်းပိုက်အတွက်အတိတ်ကာလငါးနှစ်အတွင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်. ( ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် Copy ကူး).
ကျောင်းအပ်ကာလအတွင်းအွန်လိုင်း DVs လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်.
အဆိုပါနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲများအတွက် DVs အစီအစဉ်အဘို့အစတင်နေပြီ 2020.
ကောင်စစ်ရေးရာဗျူရိုထုတ်ပြန်ကြေညာ: ရှိပါတယ် 50.000 မတူကွဲပြားခြင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် 2020. အဆိုပါကျောင်းအပ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်. အောက်တိုဘာလ 3. 2018 တွင် 12:00 မွန်းတည့် EDT. နှင့်နောက်ဆုံးနေ့အင်္ဂါနေ့တွင်ဖွစျလိမျ့မညျ. နိုဝင်ဘာလ 6. 2018 တွင် 12:00 မွန်းတည့် EST.
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှတဆင့် DVs ဖြန့်ဝေ6ပထဝီဒေသများအာဖရိက. အာရှတိုက်. ဥရောပ. မြောက်အမေရိက. Oceania. တောင်အမေရိက. အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့်ကရစ်ဘီယံ. တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံကလက်ခံရယူလိမ့်မယ်7% တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နှစ်များအတွက်ရရှိနိုင် DVs ၏.
ငါ့တိုင်းပြည်ကအမေရိကန် DVs-2020 အတွက်အကျုံး Is?
ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်ကာလအတွင်းထက်ပို 50.000 လူတစ်ဦးသည်ဤနိုင်ငံများကမှလူ DVs-2020 ဘို့လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်အောက်ပါနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချ:
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် မှလွဲ.) နှင့်၎င်း၏မှီခိုနယ်မြေများတွင်
DVs-2020 လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤဗီဒီယိုအား Watch.
အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖွင့်သည့်အခါအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်သင့်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြင်ဆင်ပါဖို့ကြိုးစားပါ. ဤသည်မှာတင်ပြတဲ့အခါသင်ကကူညီခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်. ၏အားလုံးသော posts ပြီးပါကရန်သေချာစေပါ e-DV Entry ' မှာအွန်လိုင်းဖွဲ့စည်း dvlottery.state.gov. ရေတွင်းတင်သွင်းခြင်းအခမဲ့ဖြစ်နှင့်မျှမတို့ကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိ
သင့်အနေဖြင့်၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် DV-2020 အစီအစဉ်ညွှန်ကြားချက်များ PDF ဖိုင် format နဲ့. ယင်းကိုကြည့်ပါ U.S. သံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးက်ဘ်ဆိုက် သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်သည်ဤတှငျမှေးဖှားသူမြားအပိုဆောင်းမတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာ information.People ရှိစေခြင်းငှါရှိမရှိရှာဖွေ နိုင်ငံပေါင်း အဆိုပါ DVs များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် -2020. အဆိုပါတင်ပြပြီးနောက် (DS-260) လြှောကျလှာ သင်သည်သင်၏စာရင်းဇယားများ၏တိုးတက်မှုကိုစစျဆေးနိုငျ, ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. ထပ်မံသိရှိလိုပါက. သင်ကဖတ်နိုင် အမေးအဖြေများ စာမျက်နှာ.
အဆိုပါ RCO ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး. မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. ဒီစာမျက်နှာ၏သတင်းအချက်အလက်များကနေယူထားပါသည် ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@therefugeecenter.org.